November 2018 – Kichuu
Kunis Oromiyaa Kibbaatti ijaaramaa jira; kun duula marsaa biraa ti; baatii lama booda immoo kanaan boonya!
Kunis Oromiyaa Kibbaatti ijaaramaa jira; kun duula marsaa biraa ti; baatii lama booda immoo kanaan boonya! WBO, Qeerroo fi Poolisiin Oromoo; Waan kana qalbeeffadhaa!! Aragtaye maxaa oraan laheed dhirgalinta ka ay wadaan reer ceelwaaq somaliya [Read More]
Miseensonni WBO Wirtuu Leenjii Ardaaytaatti Argaman Komii Dhiheessan
Miseensonni WBO Wirtuu Leenjii Ardaaytaatti Argaman Komii Dhiheessan Ibsa Koree Jiddu Galeessa ODP FINFINNEE — Yakki lammilee ajeesuu fi qeheef qabeenya isaani irra buqqisii hatamaan dhaabachuu qaba jedha Koreen Jiddu Galeessa ODP ibsa isaa kaleessa baasee.Korichii [Read More]
OMN:Eebba kitaaba Obbo Leencoo Lataa (Sad.30, 2018)
OMN:Eebba kitaaba Obbo Leencoo Lataa (Sad.30, 2018) maaloo kitaaba obboo LEENCOO LATAA nus dhaqabsiisaa
We respect Somali regional state prisedent:-Kana Beektuu Laata?Doolarii Mil.Tokko?
we respect Somali regional state prisedent:-Kana Beektuu Laata?Doolarii Mil.Tokko? Mil.Tokko?#Kana Beektuu Laata?Doolarii Mil.Tokko? Pirazidaantiin naannoo Sumaalee duraanii Abdii illee Obbo Mustafaa(Pirazidaantii haaraa Naannoo Sumaalee)tiif qabsoo itti jirtu dhiisii gara koo gorii na deeggari jedhee yoo kana goote [Read More]
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Sadaasa 30, 2018 SBO SADAASA 30,2018. Oduu, Ibsa ABO fi Hiriira magaalaa Naqamtee ilaalchisee gaaffii fi deebii dargaggoo Nimoonaa waliin taasisame.
Ajjeechaan Ummata Keenya Irratti Gaggeeffamu Dhaabbachuu Qaba ! (Ibsa ABO – Sadaasa 30, 2018) Duulli ajjeechaa yeroo ammaa karaa Dhiha Oromiyaa hidhattoota maqaa Ummata Gumuziin hidhachiifamanii sosso’aniin Oromoota naannoo sanaa irratti gaggeeffamaa jiru sadarkaa hedduu [Read More]
NEWS: AMID THE KILLING OF DOZENS OF OROMIA POLICE AND UNKNOWN NUMBERS OF CIVILIANS ODP ADMITS DETERIORATING SECURITY, VOWS TO BRING RAPID CHANGE Yared Tsegaye Addis Abeba, Nov. 30/2018 – In a statement it released following [Read More]
Marriott hack hits 500 million guests (bbc)——The records of 500 million customers of the hotel group Marriott International have been involved in a data breach. The hotel chain said the guest reservation database of its [Read More]
Thousands of Oromo students, health professionals and workers are protesting in Western Oromia.They are demanding the government to take action. Amboo: Sadaasa 30/2018 Gidduugaleessa Oromiyaa Magaalaa Ambootti Hiriira mormii yakka ajjeechaa suukkaneessaafi qe’eerraa buqqa’uu uummata [Read More]
Somalia to sign Indian Ocean intelligence sharing deal
Somalia to sign Indian Ocean intelligence sharing deal By Fauxile Kibet Somalia has agreed to an intelligence sharing deal with six countries bordering the Indian Ocean but is yet to append its signature to the [Read More]